Etu esi melite LG G2 na gam akporo Lollipop Official Stock | Gam akporosis
Ọ bụ ezie na ndị ji a LG G2 mba nlereanya D802 ka anyị bụrụ otu n’ime ndị ọrụ ole na ole fọdụrụ maka ya melite ọnụ gị na Android Lollipop, ihe ahụ yiri ka ọ na-ada ada na karịa mgbe anyị nwere ụzọ iji melite aka site na ihe ịtụnanya na ịtụ egwu Roms dabere na nke mbụ Rom Stock ezitere na nzukọ mmepe gam akporo dị iche iche.
Na post na-esonụ m ga-akụziri gị melite LG G2 na gam akporo Lollipop Official Stock site na Rom esiri otu nke Grola. A Rom ugbua na v2 mbipute ya bụ nke kachasị mma anyị nwere ike ịchọta na nzukọ mmepe nke gam akporo XDA. Ya mere ịmara, ọ bụrụ na ịchọrọ melite LG G2 na gam akporo Lollipop Official Stock 5.0.1, M na-akwado ka ị ghara ileghara post a anya, dị ka nkuzi anyị ga-akọwa otu esi enweta ya naanị na 15 ma ọ bụ 20 nkeji, gụnyere ngwaọrụ niile dị mkpa iji nweta ya.
1 Ihe ndị achọrọ iji banye na akaụntụ tupu emelite LG G2 ka Android Official Lollipop Stock jiri Rom esiri
2 Faịlụ dị mkpa iji melite LG G2 na gam akporo Lollipop Official Stock Iji Rom esi nri
3 Rom na-egbu maramara usoro
Ihe ndị achọrọ iji banye na akaụntụ tupu emelite LG G2 ka Android Official Lollipop Stock jiri Rom esiri
Nke mbụ bụ ịgwa ha nke ahụ nkuzi a kọwara ebe a bụ maka usoro D802 mba ụwa, Onye ọ bụla chọrọ iji ya maka ihe nlereanya na-abụghị LG G2 ga-agabiga na nnọkọ gọọmentị XDA na eri nke Rom ebe ị ga-ahụ azịza niile nye ajụjụ gị.
Nwee LG G2 nlereanya D802
Ọnụ ya ga-adịrịrị mma Mgbọrọgwụ na-onwunwe nke gbanwetụrụ Recovery, ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume TWRP.
A ghaghi imelite ihe nloghachi nke ekwuru na mbipute nke 2.8.2.0 ma obu karie, mbipute 2.8.5.1 kwadoro na ị nwere ike ibudata site ebe a. N'ebe a, anyị hapụrụ gị nkuzi dị mfe nke m na-akọwa ụzọ ziri ezi iji melite ihe gbanwetụrụ Mgbake.
Mee ndabere EFS nchekwa.
Nwee nandroid nkwado nke sistemụ arụmọrụ anyị niile ugbu a.
Nwee Ndabere nke ngwa na data anyị niile.
Mee ka batrị ahụ bido na 100 x 100
USB debugging nyeere site na ntọala ndị nrụpụta.
Faịlụ dị mkpa iji melite LG G2 na gam akporo Lollipop Official Stock Iji Rom esi nri
Iji wụnye ihe a na-akpali akpali Esie ya rom dabere na ngwa ahịa Stock Lollipop firmware, anyị ga-achọ naanị budata faịlụ a abịakọrọ na usoro ZIP ma detuo ya na ebe nchekwa nke LG G2 ma ọ bụ site na Pen Drive na USB OTG njikọ. Iji budata faịlụ ahụ, ọ ga-ezu iji mechie windo mbụ nke pụtara na wee pịa na-acha anụnụ anụnụ button na-eche 30 sekọndMgbe nke ahụ gasịrị, nbudata ahụ ga-amalite na akpaghị aka.
Buru n'uche na ịbụ Rom esiri esi na LG Stock gọọmentị, faịlụ ZIP nke anyị ga-ebudata o nwere arọ nke 1,6 Gb.
Ozugbo ebudatara faịlụ ahụ, anyị na-edegharị ya na ebe nchekwa dị n'ime ma ọ bụ na mkpịsị pen nke ejikọrọ site na USB OTG ma anyị ga-agbaso usoro ndị a gbanye Rom na LG G2 mba anyị.
Rom na-egbu maramara usoro
Ozugbo ihe niile achọrọ akọwapụtara ebe a ezutela ma budata ROM ZIP, Anyị ga-Malitegharịa ekwentị na Iweghachite na ọnọdụ anyị ga-aga n'ihu ịgbaso ntuziaka na-egbu maramara nye leta ahụ nke m ga-aza ajụjụ n'okpuru:
Anyị pịa nhọrọ Hichapụmgbe ahụ elu Hichapụ na anyị akara ihe niile ma e wezụga sdcard ma ọ bụ esịtidem ebe nchekwa nke ọnụ. Cache, Data, Sistemụ na Dalvik.
Anyị na-aga nhọrọ wụnye ma anyị họrọ zip nke Rom ma gbanye ya site na iji ogwe TWRP.
Nke a bụ ndị enyi niile, ugbu a ọ ga-ezuru nke ahụ Jiri ndidi chere ọnụ ka ịmalitegharịa ma gosi anyị ihuenyo nhazi ọhụrụ nke Android Lollipop. Buru n'uche na mbido a na-emekarị na-ewe ogologo oge karịa nkịtị n'ihi na ọ na-etinye usoro ahụ ma ọ na-amalite maka oge mbụ. Ọ bụrụ na ọnụ ga-anọ na buut ma ọ bụ buut ihuenyo maka ihe karịrị 15 nkeji, anyị ga-aga n'ihu ịmanye ịmalitegharị site na ijide bọtịnụ Ike maka ihe dị ka sekọnd asaa. Mgbe ahụ ịkwesịrị ịmalite nke ọma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG » [ROM] Otu esi emelite LG G2 ka gam akporo Official Stock Lollipop iji Rom esiri
Morningtụtụ ọma Francisco, M ga-achọ ịma ma ọ bụrụ na a Rom nwere FM redio na ihe bụ àgwà nke igwefoto na ya mma na-agba. Daalụ.
Enyi m, chọpụta nke ọma, n'ihi na echere m na njikọ ị tinyere bụ maka v2, naanị nke na-akwado nsụgharị Korea, m na-ekwugharị na echere m… ..Ma ọ bụrụ na m ziri ezi na mba g2 na-etinye ya, ọ ga-abụ na akpata gị brik.
Fracisco ị wụnyegoro na G2 gị, ịnwere ike bulite ya na nbudata ọzọ, ọ dị nwayọ nwayọ na nke a na-akwado ya. Daalụ
Etinyela ya n'ihi nke a, ekwentị m agbapụla n'ihi na ọ bụghị ụdị maka ụdị D802 ma ugbu a ọ naghị agbanye ekwentị, ọ naghị akwụ ụgwọ, ma ọ bụ kọmputa na-amata ya, ya bụ, mobile na mkpofu
David, naanị ihe ga-azọpụta ya bụ usoro JTAG, ihe dị ka nke a mere m na Cloudy V2, ugbu a na ọ bụla Onodi ha na-emere gị ya.
Ndewo huev0dur0 gịnị bụ nke JTAG, na saịtị ndị ha na-emekarị ya, ego ole ha na-akwụkarị maka nke a, bụ na enwere m mkpanaka mpempe akwụkwọ, daalụ.
EBUPSTTA A ROM !!!
O hapuru gi ekwentị gi dika brick. Aghọtaghị m otú androidsis si enye ohere mgbasa nke njikọ na-emerụ faịlụ. Echere m na ha bụ ndị a pụrụ ịtụkwasị obi !!!
Zaghachi Juan Barbato
Ezi, Anya !!!!, Enwere m ịnyịnya ibu na-etinye nke ROMs na maka ntụkwasị obi na-atụkwasị obi na POST a, ejiri m ekwentị kpochie !!!! pụtara * * .TOT faịlụ, site ebe ahụ, enwere m ike ịtinye RECOVERY, mgbọrọgwụ ma nwee obi ụtọ weghachite nkwado nandroid nke m nwere. Ma ichoputa otu esi eme ya were m 4 awa !!!, Ọ fọrọ nke nta ka m nweta akwụkwọ mpempe akwụkwọ.
Nwere ike ịnweghachite ekwentị mkpanaka ahụ, ahapụwo m ya brik karịa otu oge, na ekele na forums (gụọ), na Ngwaọrụ LG, ị nwere ike iweghachite ya site na Stock Rom.
Tupu ịgbagha gburugburu, mee ndabere, ị gaghị akwa ụta
Ọnọdụ 1490 ngwa ngwa malitere
Nke ahụ pụtara m ma hapụ m ka m mee ihe ọ bụla ...
Zaghachi Simon Neri
Ngwa ngwa gam akporo gam akporo dị ugbu a na Storelọ Ahịa Play